युद्धले जन्माएको एसओएस स्कुल बालग्राममा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध हुने भएकाले बिहेवारी चल्दैन । ‘बालग्रामबाहिरका समुदायकासँग भने विवाह गर्न मिल्छ । बालग्रामले नै अभिभावकत्व निर्वाह गरेर विवाह गर्दिन्छ’, उनी भन्छिन् २५ चैत, २०७७ 10 min read Share
‘डढेलो मात्र कारण होइन, पानी नपरे र हावा नचलेसम्म वायु प्रदूषण हट्दैन’ ‘नेपालमा ४२ हजारको मृत्यु वायु प्रदूषणले हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ’, उनी भन्छन्, ‘मान्छेको आयु पनि घटाउँछ । गर्भवती महिला छ भने नजन्मेको शिशुलाई पनि असर गर्छ । २० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु वायु प्रदूषणले नै हुन्छ’ १६ चैत, २०७७5min read Share
पटनामा उपेक्षित बीपी सालिक देखेर फर्केपछि फिल्म बनाउँदै नेपाली टाेली ‘बीपीलाई भारतमा कति मान्दा रहेछन् भन्ने यो प्रमाण हो । भारतको स्वतन्त्रताका लागि बीपी लड्नुभयो । भारत स्वतन्त्र नभएसम्म नेपाल स्वतन्त्र हुन सक्दैन भनेर बीपीले भन्नुभएको थियो । लेख्नु पनि भएको छ । बीपीको उच्च विचारलाई भारतले स्थान दिएको हो’ १६ चैत, २०७७ 11 min read Share
उपत्यकामा उच्च वायु प्रदूषण, जोगिन के गर्ने ? (भिडियोसहित) ‘एक्यूआइ ३ सय बढी पुगेको छ । ३ सय बढी हुनु भनेको उच्च जोखिम हो’, वातवरण विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीले भने, ‘काठमाडौं अस्वस्थकर छ । हावा चल्यो पानी पर्यो‍ भने जोखिम कम हुन्छ नत्र अझै बढ्छ ।’ १३ चैत, २०७७4min read Share
समुदायमा रूप बदल्दै कोरोना, किन गरिएन जिन सिक्वेन्सिङ ? लक्षणसहितका संक्रमित देखिन थालेपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका रिसर्च युनिटका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनले प्रश्न गरेका थिए, ‘भाइरस म्युटेन्ट (उत्परिवर्तन) भएको त होइन ?’ १३ चैत, २०७७6min read Share
काेराेना खोप तत्काल नआउने, विज्ञ भन्छन्– छिटो कूटनीतिक पहल गरौँ सरकारले खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पनि होइन । खोपका लागि आर्थिक अभाव छैन भनेर सरकारले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सरकारको लय हेर्दा दाताहरूकै भरमा परेको देखिन्छ १२ चैत, २०७७ 8 min read Share
के हो कोरोना ‘डब्बल म्युटेन्ट’ ? नेपालमा पनि नयाँ भाइरस घुमिरहेको हो ? नेपालमा नयाँ भेरियन्ट बनेको छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ । नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर हेरिएको छैन । यद्यपि, भाइरस आफैँमा म्युटेन्ट भइरहने हुनाले नेपालमा पनि म्युटेन्ट भएको हुन सक्छ १२ चैत, २०७७6min read Share
विज्ञको प्रतिवाद : लकडाउन होइन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ ‘अहिले हामी दोस्रो चरणमा गएको भनि हाल्ने स्थिति होइन । दोस्रो चरणमा जान सक्ने संकेत पक्कै हो । बढी सतर्क हुनुपर्ने स्थित बनायो’, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्यका अरु प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगबाट कर्यान्यवन गर्नुभन्दा अगाडि लकडाउन गर्नु समस्याको हल हो भन्ने लाग्दैन ।’ ११ चैत, २०७७3min read Share
चीनमा एमबीबीएस गरेका विद्यार्थीकाे अपिल : सरकार, हामी योग्य छौँ, डाक्टर हुनबाट नरोक पीडित विद्यार्थीहरू पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुगिसकेका छन् । सम्बन्धित निकायले एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन् १० चैत, २०७७7min read Share
फेरि किन बढ्यो कोरोना संक्रमण ? भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिने ‘आगो निभेको छैन । दूरी कायम नगरि, मास्क नलगाइ सभा सम्मेलन गर्दा बिरामी त बढ्ने नै भए । हामी महामारीमै छौं । मापदण्ड पालना नगर्दा भाइरस फैलने भयो ।’ ९ चैत, २०७७4min read Share
'कोरोना महामारी सकिएको छैन, लापरवाही गरे अर्को चरणमा उक्लिने जोखिम छ' (अन्तर्वार्ता) अहिले संक्रमण घटिरहेको छ । किन घटेको छ भन्ने केही कारण छ । कति हाम्रो कार्यक्रम, वातवरण र हाम्रो जिम्मेवारीले घटेको होला । तर, जोखिममुक्त भएका छैनौँ ६ चैत, २०७७ 10 min read Share
खोपमा मिसियो भू–राजनीति, भारतीय स्वार्थका कारण खरिद प्रक्रिया अन्योलमा नेपालले कोभिसिल्ड नल्याएर कोभ्याक्सिन ल्याओस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ ५ चैत, २०७७9min read Share
बूढानीलकण्ठ स्कुल, जहाँ छिर्नुअघि विद्यार्थीले भुल्नैपर्छ आफ्नो थर छुवाछुत र विभेदलाई रोक्न थरको सट्टा रोल नम्बर राखेको उनी बताउँछन् । ‘धनीका छोराछाेरीदेखि हिमाल, पहाड, तराईका गरिबसम्मले पढ्छन् । म काठमाडौंबाट आएको, म बाहिरबाट आएको भन्ने नहोस् भनेर हो । बरु ७७ जिल्लाको भाषा संस्कृति विद्यार्थीले सिक्न पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ पूरा नेपाल अटाएको छ’ ३ चैत, २०७७ 13 min read Share
कक्षा २, ३ र १२ मा नयाँ पाठ्यपुस्तक, यस्ता छन् विषय आगामी शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा २, ३ र १२ मा नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू हुने भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ २ चैत, २०७७3min read Share
बालाजु बाइपास सडक : सरकारी पक्ष र पीडितको प्रमाण नै फरक-फरक दुवै पक्षले फरक–फरक तर्क र प्रमाण देखाउँछन् । दुवै पक्षले पेस गरेको फिल्डबुक पनि फरक छ । सरकारी पक्षले पेस गरेको फिल्डबुकमा कसैको नाम छैन । तर, पीडित पक्षले पेस गरेको फिल्डबुकमा नाम देखिन्छ २९ फागुन, २०७७ 13 min read Share
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसले फारम नदिएपछि विद्यार्थी पुगे अदालत सीम्याट पास गरेपछि बीबीए पढाइ हुने जुनसुकै कलेजमा पढ्न पाइने भएकाले उनी घरपायक पर्ने महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा फारम भर्न २३ फागुनमा पुगे । तर, कलेजले उनलाई फारम दिएन २६ फागुन, २०७७3min read Share
सिंहदरबार हल्लाउने ‘भद्रा दिदी’ ‘आखिर छोरीले किन पढ्न नहुने ? छोरा मात्रै मान्छे हो त ? के छोरीले छोरासरह कामै गर्न सक्दैनन् ?’ समाजलाई यिनै प्रश्नले प्रहार गर्थिन्, भद्र । तर, छोरीप्रति पूर्वाग्रही समाजले भद्रका यी प्रश्नको भद्दा मजाक उठाइरहन्थ्यो । २४ फागुन, २०७७ 16 min read Share
खोपले ज्येष्ठ नागरिकमा ल्याएको उत्साह खोप लगाउन उनीहरू आतुर र उत्साहित देखिन्थे । कति त कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक घरबाट बाहिर निस्किएका रहेछन् । बाहिर निस्कन पाएकोमा थप उत्साहित थिए । सिभिल अस्पतालको प्राङ्गण आइतबार हेर्नलायक देखिन्थ्यो २३ फागुन, २०७७7min read Share
अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला अवार्ड पाएकी मुस्कान भन्छिन्, ‘हिंसाविरुद्धको आवाज बन्नेछु’ रोजी म्यामको फोनले मुस्कानलाई सर्प्राइज दियो । सुरुमा त उनलाई विश्वास नै लागेन । ठूलो अवार्ड पाउँछु भन्ने मुस्कानले सोचेकी पनि थिइनन् । तर, आशा भने मुस्कानलाई रहेछ २१ फागुन, २०७७4min read Share
सरकार ! रमाको आँसु लाग्ला २०७२ साल । विनाशकारी भूकम्प गएको वर्ष । देश भूकम्पले हल्लायो । कैयौँ घरहरू भत्किए । धनजनको क्षति भयो । तर, रमा श्रेठको घर भूकम्पले छोएन । त्यही साल उनको घरमा भने सरकार लाग्यो २० फागुन, २०७७5min read Share
‘निर्दयी सरकार : हाम्रै घर भत्काउने, हामीलाई नै थुन्ने ?’ ‘यो देशमा सरकार छ ?’, ६७ वर्षीय भीमदेव श्रेष्ठ प्रश्नसँगै उत्तर पनि आफैँ दिन्छन् । ‘जनताको सरकार छैन । न्याय माग्दा पाक्राउ गर्ने पनि सरकार हुन्छ ? शासक त सेवक हुनुपर्ने हो, यहाँ शासक नै शोषक भए’ १९ फागुन, २०७७6min read Share
जब नवीन्द्रराज जोशीले दबाई खान उठाएकाे हात बाउँडियो... ‘मेरो हात बाउँडियो । गाह्रो भयो । मलाई छिटो अस्पताल लैजाऊ’, नेता जोशीले आत्तिँदै श्रीमती सपनालाई भने १४ फागुन, २०७७5min read Share
खोप लगाउनेको संख्या सरकारको लक्ष्यभन्दा कम, दुई दिन समय थपियो सरकारले पहिलो चरणमा कोरोनाविरुद्धको खोप ४ लाख ३० हजरलाई लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको लक्ष्य अनुसार खोप लगाउनेको संख्या कम देखिएको छ । ९ फागुन, २०७७5min read Share
आफ्नो जग्गा कसले मिच्यो थाहा छैन, ठाउँ नपुगेर भीरपाखा हेर्दै टेकु अस्पताल ‘उ त्यो पहेँलो घरसम्मको जग्गा टेकु अस्पतालकै हो’, डा. राजभण्डारीले छतबाट देखाउँदै भने, ‘यहाँ सास फेर्न पनि गाह्रो छ । जमिन घट्दै गएको छ । बाहिर बनेका घर कसको हो थाहा छैन । हरेक पक्षबाट अपहेलित अस्पताल हो यो’ ७ फागुन, २०७७ 15 min read Share
३० हजारमा दुइटा मोबाइल पाउने लोभले ७५ हजार स्वाहा ! पटक–पटक गरेर कुल ७५ हजार रुपैयाँ पैसा पठाइसकेपछि भने पुजन कतै त्यो मान्छे गलत त होइन भनेर झस्किए । सलामीले फेसबुकमा राखेको नम्बरमा फोन गरे । तर, त्यो नम्बरमा फोन लागेन ४ फागुन, २०७७6min read Share
आशाका आधारशिला : महामारीमा टेकु अस्पतालले दिएको टेको यो महामारीमा टेकु अस्पतालको टिम देख्दा आज देशले गर्व गर्न सक्छ । यस्तै आशाका आधारशिलाहरू थपिँदै जाँदा त हो नि, कुनै पनि देश बन्ने भनेको ३० माघ, २०७७9min read Share
‘हाम्रो त भाग्यमै दुःख लेखिएको रै'छ’ बिहीबार बिहानैदेखि जाने र आउनेको एउटै समस्या थियो । आएकाहरू कति बेला घर पुगौँ भन्नेमा थिए । कति फोनबाटै परिवारसँग खुसी साटिरहेका थिए । जानेहरू परिवारसँग टाढिन लागेकोमा आँसु झारिरहेका थिए २२ माघ, २०७७4min read Share
सातै प्रदेशमा पुग्यो खोप, उपत्यकामा १७ वटा अस्पतालबाट लगाइने खोप महाशाखाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १७ वटा खोप केन्द्रबाट खोप लगाइने भएको छ । काठमाडौंमा १२ वटा, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुईवटा केन्द्र निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ १२ माघ, २०७७5min read Share
‘दुई हप्ताभित्र फ्रन्टलाइनरको पाखुरामा खोप लगाउँछौँ’ हिजो खोप बन्छ कि बन्दैन भन्ने थियो । बन्यो । खोप आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो । आयो । विश्वबजारमा खोपको उपलब्धता कम, माग धेरै छ । हामीले पनि केही मात्रामा खोप पाएका छौँ । अब जोखिम हेरेर न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्छौं ८ माघ, २०७७4min read Share